Cobia Systems: Mgbasa ozi na akpakọrịta zuru ezu | Martech Zone
Marketingwa ahia agbanwewo nke ukwuu na afọ nke ihe ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta. Site na iju mmiri nke ihe ngwọta dị taa, akụrụngwa maka ndị ọkachamara na-ekwusi ike karịa na-adị elu karịa. Ọtụtụ ngwaọrụ na-enye akụrụngwa na ọrụ maka azụmaahịa, mana otu ihe ha na-enyeghị bụ sistemụ ga - enyere gị aka ịchọta ndị ahịa gị oge ha gosipụtara mkpa.
Usoro Cobia emepụtawo usoro a gbanwere iji gbanwee egwuregwu nke otu azụmaahịa si erute ndị ahịa. Mgbe ị debanyere aha gị, azụmahịa gị ga-enweta ihu ọma mara mma, a ga-edekwa ya na ndekọ na saịtị Google.
Cobia Systems Nlekọta Nlekọta
Kpọmkwem na ihu ihu nke dashboard gị, a na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ ngwaọrụ iji nyochaa mkparịta ụka nke netwọkụ ha, gụnyere ndị ahịa nwere ike ịchọ enyemaka ozugbo. Usoro ha dabere na ozi sitere n’aka onye okacha amara - onye nwe ahia - iji zube nkebi ahịrịokwu ndị metụtara azụmahịa ha. Mgbe etinyela isiokwu okwu, nke a setịpụrụ Cobia System na gia maka usoro azụmaahịa zuru ezu.
Cheedị banyere ndị ahịa na-ekwu banyere etu otu ahịrị dị nwayọ n'ahịa gị, wee nwee ike ịza ya ozugbo na dere na ịrịọ mgbaghara iji nyere aka na nsogbu ha. Ohere ndị ahụ agaghị emepe maka azụmahịa gị?
Ndị na-ere ahịa ụgbọ ala nwere ike ịmata otu n'ime okwu kachasị ewu ewu na mgbasa ozi mgbasa ozi, Achọrọ m ụgbọ ala, na nzaghachi azara ndị ahịa dabere na akara ngosipụta ha - nke a bụ aka onwe nke enyere maka ndị na-ege gị ntị. Inwe ikike n'ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara gị na azụmaahịa gị dị n'etiti njikwa aha, nke usoro ha na-agba ume site na ịgafe site na ịzaghachi post onye ọrụ.
Usoro Cobia Systems
Akụkụ dị mkpa nke iso ndị ahịa gị na-ekwurịta okwu bụ site n'ichekwa isiokwu mkparịta ụka ụbọchị. Ejiri atụmatụ oge Cobia wepụta oge ejiri obi gị rụọ ọrụ site na ịchọọ web maka akụkọ kachasị mkpa dabere na isiokwu gị dị mkpa.
Dị ka ihe akpaghị aka mgbakwunye na ụlọ ọrụ gị ọdịnaya mbụ, isiokwu ndị a ga-kwụ n'ahịrị na gị omenala nzacha, na mgbe ahụ biputere na gị Facebook ma ọ bụ Twitter mgbidi n'ime awa isii. Arụ ọrụ na isiokwu ndị a na-ewu ewu na-ewu ewu, nke ị na-enyocha, ga-ahụzi netwọkụ nke ndị ahịa gị, na-arịwanye elu nke ụlọ ọrụ gị.
Mgbasa ozi na njirimara akara bụ ihe dị mkpa na-adọta azụmahịa ọhụrụ na ịdebe ndị ahịa ugbu a. Nnọgidesi ike na-amịpụta nsonaazụ, ọkachasị mgbe ndị ahịa mara na enwere ihe metụtara ya. Kpọsa ma na-adọta ndị ahịa ọhụrụ yana ịghachite ndị ahịa ochie.
Mgbasa Ozi Cobia
na Usoro Cobia'Mgbasa atụmatụ, ndị ahịa gị agaghị echefu ihe ọ bụla ụlọ ọrụ gị ga-eme. N'ime usoro ha, ị nwere ike ịmepụta mkpọsa ahịa zuru oke gụnyere nkọwa na oku na-eme ka koodu nkwado. Ga-achịkwa oge mkpọsa gị yana onye natara ọgbụgba gị na oke kachasị. Na Cobia, ndị ọrụ ha nwere nwetara mmụba nke 100% na 3,400% na ndị na-eso ụzọ gaa na ahia ha site na iji ihe omuma ha.
Cobia Systems na-enye gị ngwaọrụ iji chee echiche nke ọma, na-eme ka ọrụ azụmaahịa gị kwa ụbọchị gaa n'otu ikpo okwu, ma na-enye gị nsonaazụ ezubere iche iji meziwanye ọbịbịa gị. Gịnị mere ndị ahịa gị kwesịrị iji chọọ gị? Kwesịrị ịchọta ha. Devan Sharma - Onye isi na Onye guzobere Cobia Systems
Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ga-enyocha ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere akara gị na ahịa dijitalụ yana ikiri ọnọdụ na mgbanwe na asọmpi iji jide n'aka na akara gị ga-adị ugbu a ma zute nsogbu ndị ahịa niile. Mgbasa ozi ga-enye gị ohere ịbanye n'ime akara gị ma dọpụta mkpa nke ndị ahịa ugbu a n'ime atụmatụ ahịa gị kwa ụbọchị maka ahịa. Okike gị na ngwaọrụ iji chịkwaa aha gị n'ịntanetị dị mkpa iji gbochie ọdịnaya na-agbụ agbụ na mwakpo mgbasa ozi na-eto eto.
Tags: edemede ederedeakpaghị aka na-elekọta mmadụ mediasistemụ cobiaDevan Sharmadirectoryazụmahịa googleelekọta mmadụ medianlekota oru mgbasa ozinlekota oru